Iska Iloow Pogba, waxaa jira labo ka daran oo kala tirsan Man United ooba LACAGO ku kala qaatay CEYRINTA Jose Mourinho….(Waa Kuwee??) – Gool FM
Iska Iloow Pogba, waxaa jira labo ka daran oo kala tirsan Man United ooba LACAGO ku kala qaatay CEYRINTA Jose Mourinho….(Waa Kuwee??)
(England) 21 Dis 2018. Jose Mourinho ayaa natiijo xumo iyo isqab-qabsi uu la galay ciyaartoyda kaddib la ceyriyay Talaadadii la soo dhaafay iyadoona la wariyay in ciyaartoyda Man United badankooda ay ku faraxeen in kooxda laga diro.
Pogba ayaa la ogaa inuu Baraha bulshada soo dhigay sawir jees jees ah oo dood badan dhaliyay isla markii la ceyriyay macalinkii ay xurdufta kala dhaxeysay.
Laakiin sheekadiisa ayaaba Janno noqotay oo waxaa ka sii daray Alexis Sanchez oo sheeganaya inuu Marcos Rojo uga guuleystay 20,000 bound maadaama uu sheegay in Jose la ceyrinayo halka uu daafaca reer Argentina isna sheegay inaan la ceyrin doonin.
Fariin la helay uu Sanchez saaxiibadiisa ugu soo diray WhatsApp ayaa u dhaceysay:
“Waan kuu sheegay sidaa, Sabarku waa kan la doonayo, Rojo waxaan kugu leeyahay 20,000.”.
Sanchez ayaa markii uu fariintaan soo dirayay ku sugnaa dalkiisa Chile kaddib markii uu soo ifbaxay warkii ahaa in la ceyriyay Jose Mourinho maalinkii Talaadada.
Laacibka ugu mushaarka badan Premier League ayaa ka mid ahaa xiddigihii uu lumiyay Jose Mourinho intii uu xilka u hayay Manchester United.
Jeison Murillo oo ka hadlay dareenkiisa kadib ku biiristiisa kooxda Barcelona